Homeसमाचारकुखुराको मासुको मूल्य, अहि’लेसम्मकै उच्च बिन्दुमा
April 24, 2021 admin समाचार 3793
पछिल्लो समय कु’खुराको मासुको मूल्य दिन प्रतिदिन उकालो लाग्नेक्रम जारी छ। काठमाडौँ र चितवनमा कुखु’राको मासुको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च बि’न्दुमा पुगेको छ।
राष्ट्रिय कु’खुरा व्यवसायी सङघका अध्यक्ष जङगबहादुर बीसीका अनुसार शुक्रबार कुखुराको मासु प्रतिकेजी काठ’माडौँमा ४३० रुपियाँ र चितवनमा चार सय रुपि’याँमा कारोबार भइरहेको छ।
साना व्यव’सायीले यो मूल्यभन्दा १०/१५ रुपियाँसम्म बढी मूल्यमा कुखुराको मासुको कारोबार ग’रिरहेको पाइन्छ। “पछिल्लो एक महिना लगातार कुखुराको मासुको मूल्य बढिरहेको छ। अझै केही समय यही मूल्य का’यम रहने देखिन्छ।”
अध्यक्ष बी’सीले भने, “यो मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च मूल्य हो।” व्यवसायीले किसानबाट जिउँदो कुखुरा प्रति’किलो काठमाडौँमा ३१० र चितवनमा २८५ रुपियाँमा खरिद गर्ने गर्छन्। गोरखा’पत्रमा खबर छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्, आ’गामी बजेटमा डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न ग्रा’हकलाई सहुलियत र छुट दिनुपर्ने, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले तिर्नुपर्ने शुल्क ५० प्रतिशतले कम गर्नुपर्नेलगायतको सुझाव नेपाल बैङ्कर्स एसोसि’एसनले दिएको छ ।
गैरआवसीय नेपालीहरूसँग भएको पुँजी, पुँजी बजारमार्फत प्रवद्र्धन गर्न विशेष प्याकेज व्यवस्था गर्नुपर्ने एसोसिएसनको सुझाव छ ।
सरका’रले प्रदान गर्ने विभिन्न प्रकारका अनुदान’बापतको रकमको अतिरिक्त स्था’नीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा भएको सम्पूर्ण रकम स्थानीय तहको कारोबार गर्ने बैङ्क’हरूमा निक्षेप रहने व्यवस्था गरेमा बैङ्किङ क्षेत्रमा थप तरलता उपलब्ध हुन गई कर्जा प्रवाहमा सहजता हुने एसोसि’एसनको सुझाव छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
March 30, 2021 admin समाचार 3968
March 28, 2021 admin समाचार 3791
October 27, 2020 admin समाचार 9098
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (227925)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (220870)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (220721)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (217740)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (215440)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (214193)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (214083)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (182556)